Anbika – anbika giri
यो कथा मुल्यांकन मासिकमा २०६७ सालको दशैं अंकमा छापिएको थियो | यो कथा ०६७ बैशाषमा एमाले झापाका कार्यकर्ता डेकेन्द्र राजवंशीले एमाले मुख्यालय बल्खुमै आत्महत्या गरेको र उनका छोरा शम्भुले पनि पाँच महिनापछी आत्महत्या गरेको पृष्ठभूमीमा लेखिएको हो |
सरोजकी आमा रोएकी थिइनन्। आँखाका डिलहरुबाटै थाहा लाग्थ्यो, उनको एकथोपा आँशु पनि बहेको थिएन। म खबर पाएको एक घण्टामा नै गएको थिए। उनी रुँदै होलिन् भनेर सान्त्वनामा के भन्ने भनेर आधा घण्टाको बाटोभरी म सोच्दै थिए। घर पुग्दा उनी आँगनको कुनामा बाधेको गाइलाई घाँस हाल्दै थिइन। भत्कनै लागेको पिढीमा केहि आइमाइहरु बसिरहेका थिए। उनीहरु सप्कोले सिँगान र आँशु दुबै पुछ्दै थिए। उनीहरुका आँखा कहिले आँगनको विचको लाशमा त कहिले गाइलाई घाँस हालिरहेकी सरोजकी आमामाथि थियो। केहि लोग्नेमान्छेहरु पनि थिए जो आँगनमा उनको छोराको लाशलाई कात्रोले छोप्दै थिए। केहि केटाकेटीहरु पनि थिए जो लाशलाई डराइडराइ हेरिरहेका थिए। अरु पनि केहि मान्छे थिए, जो खासखुस गर्दै थिए।
त्यहि खासखुसबाट थाहा भयो, सरोजले विहान ११ बजे घर मुन्तिरको बकैनाको बोटमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेको रहेछ। अनि भिड मै कसैले भन्यो, “धेरै टेन्सन छ भन्दैथियो” Continue reading “म मर्दिन कमरेड !”
Author AnbikaPosted on November 15, 2013 November 15, 2013 Categories FictionLeaveacomment on म मर्दिन कमरेड !
सौर्यमा प्रकाशित अन्तरवार्ता! लेख्दै गर्दा आफुले विगतमा दिएका जवाफहरु पनि ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यसैले आज फेरी आफुले भनेका कुराहरु दोहोर्याएर पढें !
आन्विका गिरी समकालीन नेपाली कथाकारबीच जानपहिचानको नाम हो । उनको पहिलो कथासंग्रह ‘कम्युनिस्ट’ निकै रुचाइएको कृति हो । गिरी मजदुर, किसान अनि आममान्छेको जिन्दगीसाग जोडिएका विषयहरूमा आफ्ना पात्र खोज्छिन्, र त्यहाा परिस्थितिअनुसार पाठकलाई आफ्नो अनुहार देखाइदिन्छिन् । शैली, भाषा, संवेदना र समाजको सटिक चित्रणका लागि उनका कथा रुचाइन्छन् । उनका ‘कम्युनिस्ट’, हिरोहोण्डा’लगायत कथा चर्चित छन् ।
अहिले बजारमा हटकेक हुनुभाको छ, तपाइंका कथा रुचाइएका छन् । पछिसम्म पनि ती कथा अजर–अमर होलान् ?
हटकेक ? यो शब्द साहित्यमा अलि धेरै फ्यान्सी भयो जस्तो लाग्यो । म हल्लाहरूबाट बाहिर छु । साहित्यिक कार्यक्रममा पनि म खासै नजाने भएकाले कहिलेकाहीँ त म मेरा कथाहरूको प्रतिक्रियासमेत थाहा पाइरहेको हुन्न । जहाँसम्म कथाहरूको अजर–अमरताको कुरा छ । मेरो कोसिस मेरा कथाहरूले वर्तमान समयको राम्रोसँग व्याख्या गर्न सकुन् भन्ने हो त्यसो भयो भने भविष्यमा मेरो कथाहरूको खोजी त होला नै । तर, त्यसमा मेरो नियन्त्रण हुँदैन । म त प्रयाससम्म गर्न सक्छु ।
तपाईंको कथा ‘हिट’ हुनुमा आफ्नो व्यक्तिगत भोगाइ कत्तिको जिम्मेवार छ ?
मलाई के लाग्छ भने मान्छेले पहिले आफ्नै भोगाइबाट लेखनको सुरुआत गर्छ । मैले पनि त्यसै गरेँ । यसको मतलब यो होइन कि सबै मेरा कथाहरू हुन् । मेरो व्यक्तिगत भोगाइभन्दा पनि कथामा उठाइएका विषयवस्तुको प्रस्तुतीकरण कथा रुचाइनुका कारण हुन सक्छन् ।
भनिन्छ, आन्विकाको कथा आवेगहरूको एउटा थुप्रो हो । तपाईंका कथामा बढी आवेग हुन्छ कि विवेक ?
आवेगमा नआई त म कथा लेख्नै सक्दिनँ । जबसम्म कुनै विषयले मलाई भित्रैसम्म घोच्दैन, मलाई रुन चाहेर पनि रुन नसक्ने स्थितिमा पुर्‍याउँदैन तबसम्म त म लेख्नेबारे सोच्नै सक्दिनँ । जब कुनै कुराले मेरो मथिंगल कचमच्याउँछ अनि बाटोमा हिँड्दा पछाडिबाट बजेको गाडीको हर्न सुन्न छाड्छु वा अगाडिको गाडी देख्न छाड्छु तब मात्र मलाई लाग्छ, ल यो विषयमा अब मैले लेख्नुपर्छ । त्यसैले आवेग त कथामा आउँछ नै । तर, आवेगकै थुप्रो हो भन्ने कुराचाहिँ म मान्दिनँ किनकि म आफ्ना कथामा तर्क स्थापित गर्न खोज्छु विवेक नभई त त्यो कहाँ सम्भव छ र ? Continue reading “हामी कुण्ठा पोख्न लेखिरहेका छौं !”
Author AnbikaPosted on October 17, 2013 Categories UncategorizedLeaveacomment on हामी कुण्ठा पोख्न लेखिरहेका छौं !
कसैको रुवाइ बिस्तारै चर्किंदै गएपछि मेरा आँखाहरू आफसेआफ खुले । आँखा खोल्दा कोठा अँध्यारो थियो । सबैभन्दा पहिला सदाझैं मैले आमालाई छामे । आमा हुनुहुन्नथ्यो । अनि मलाई पक्का भो, उज्यालो भएछ । जाडो बढ्दै गएकाले हुस्सुले छिटो उज्यालो हुन नदिने मलाई थाहा थियो । आमा गाईलाई खोले पकाउन चारै बजे उठ्नुहुन्थ्यो । आमा ओछ्यानमा नभएपछि मलाई लाग्यो, चार बजिसकेछ ।
को रोएको होला यति बिहानै भनेर मलाई झर्को लाग्यो । मेरी आमा पो चार बजे उठ्नुहुन्थ्यो, मेरो त उठ्नेबेला भएको थिएन नि । मैले जोड गरेर आँखा चिम्लन प्रयास गरें तर सकिनँ । रुवाइ धेरै परबाट होइन, मेरै आँगनबाट आएको थाहा पाउन मलाई बेर लागेन । मान्छेहरूको कल्याङमल्याङ पनि बढ्दै गएको थियो । मैले झ्याल उघारे । पूरै गाउँ उल्टेर आँगन भरिएको थियो । कोही ‘बिचरा’, कोही ‘च्वच्व’ त कोही ‘पापीहरू’ भन्दै थिए । सबै एकैचोटि बोलिरहेकाले होला मैले प्रस्ट केही बुझ्न सकिनँ । सबको बीचमा घेरिएर रोइरहेकी आइमाई झन् जोडले झन् जोडले रुन थालेपछि म दौडिएर तल झरें । म तल झर्दा अर्को टोलका बूढाकाका हातमा लालटिन लिएर आउँदै थिएँ । म भीड चिरेर त्यो रोइरहेकी आइमाईलाई हेर्न छिरें । कस्तो बुद्धु थिएँ म त्यतिबेला, आफ्नै आमा रोएको पनि मेसो पाएको थिइनँ । बूढाकाकाको लालटिनको उज्यालोमा मैले आमाको आँसुले भिजेको अनुहार देखें । भीडमा हाफ भेस्ट मात्र लगाएर जाडोले काम्दै गरेको मलाई देखेर आमाले गम्लंग अँगालो हाल्नुभो, ‘पापीहरूले बुवालाई मारे ।’
रातिमात्र म भोलिबाट स्कुल जाने सपना देख्दै सुतेको थिएँ । बाले ल्याइदिएको नयाँ किताब, नयाँ लुगा, नयाँ कापी, नयाँ कलम बोकेर आफंै पनि नयाँ भएर जाने रहरले निदाउन दिएको थिएन । बाले हप्काउन परेको थियो । बाकै डरले आमाको छातीमा डल्लो परेर म निदाएको थिएँ । Continue reading “मृत्यू : हिजो, अस्ति र आज”
Author AnbikaPosted on October 17, 2013 October 17, 2013 Categories FictionLeaveacomment on मृत्यू : हिजो, अस्ति र आज
मैले २००८ तिर यस्तो आर्टिकल लेख्या रैछु । त्यतिखेर नयाँ पत्रिकामा छापिएको थियो ।
कम्युनिष्टका बारेमा मान्छेहरूको आफ्नो आफ्नै धारणा भएपनी, स्टालिनको ‘बिशेष धातु’ले कम्युनिष्टहरू बनेका हुन्छन् भन्ने कुरा निकै महत्व पुर्ण छ । हामीले स्कुलमा हुँदा बुझेको कम्युनिष्टहरू एमालेहरू थिए। उनीहरू भ्रष्टाचार गर्दैनन्, सरल जीवन बिताउँछन्, जनताको माझमा हुन्छन्, विकास गर्छन्, बहस गर्छन्, जुनसकै विचारको वा सिद्धान्तको भएपनि मिलाएर लैजाने क्षमताका हुन्छन्, प्रगतिशिल हुन्छन्, सभ्य भाषाको प्रयोग गर्छन्, उनीहरू जस्तोसुकै परिश्थितीको पनि डटेर सामना गर्छन, उनीहरू हार मान्दैनन्, उनीहरू रून्चे हुँदैनन्, बिदेसीको हेपाई सहदैनन्, यस्तै यस्तै । ‘एमाले कम्युनिष्ट’का बारेमा यो बुझाइ मदन भण्डारी र मनमोहनलाई देख्दासम्म जीवितै थियो । त्यसपछि, न त उनीहरूले भ्रष्टाचार कम गरे, न त सरल जीवन बिताए, न त जनताको माझमा गए न त विकास नै गरे ! अन्य पार्टीका नेताहरू हुन् कि एमालेका, ब्याबहारमा छुट्याउन हामीलाइ गार्हो भयो र एमालेहरू ‘कम्युनिष्ट’ रहेनन् ।
एमाले हुनेहरूले जब कम्युनिष्टको परिभाषा भित्र आफुलाई अटाउन सकेनन् तब नयाँ शक्ति ‘माओवादी कम्युनिष्ट’को नाम लिएर अगाडी आयो । उनीहरू जनताको माझमा गए, जनतालाई राजनीतिक रूपमा चेतनशिल बनाए । जनताले दिएको ढिडो खाएर लडे, जनताले झै सरल जीवन बिताए । तिनीहरू नै स्टालिनले भनेझै साँच्चिकै बिशेष धातुले बनेका कम्युनिष्ट हुन्छन भन्ने धारणा पुन:बन्यो । त्यसैले, एमालेको पतनपछि कम्युनिष्ट भन्दा माओवादीहरू हुन् भन्ने भ्रम थियो र छ । Continue reading “विशेष धातुका कम्युनिष्टहरु?”
Author AnbikaPosted on July 3, 2013 Categories article2 Comments on विशेष धातुका कम्युनिष्टहरु?
सन्चो बिसन्चो सोधनी गरेँ
चिठीमा मैले मनको बह पोखेकी छु
धैरै धेरै गुनासाहरू पोखेकी छु
म एउटा ठूलो सहरमा छु
झिलिमिली बत्ती बल्ने सहरमा
ठूला ठूला कारखाना भा’को सहरमा
ठूला ठूला घर भा’को सहरमा
तर यहाँ मान्छे बस्दैनन्
म त गिद्धै गिद्धै भा’को सहरमा छु
मलाई स्कुल हाल्द्या भए
भाइसँगै स्कुल पठाइद्या भए
भान्छामा मात्र नराख्या भए
देश विदेश देखाइद्या भए
समय परिस्थिति बुझाइद्या भए
आज म पढेकी हुन्थेँ
केही बुझेकी हुन्थेँ
सही गलत मान्छे चिन्न सक्थेँ
तपाईलाई त म जन्मने बित्तिकै खेद भो
न्वारानदेखि नै मलाई भेद भो
अज्ञानको कुहिरोमा रूमल्लिएकी
म कुवाको भ्यागुता झैँ भएँ
सपन त मेरा पनि थिए
तर, तपाईलाई सुनाउँदा
पोथी बास्नुहुन्न भन्नुभयो
सपना बिर्सन सकिन
राम्रो लाउने, मीठो खाने, जागिरे बन्ने !
एउटा झिल्के भेटियो
कसो कसो मख्ख परियो
उसकै पछि तपाईलाई नसोधी
म धैरै पर आइपुगेँ
बा, म धैरै पर आइपुगेँ
हुन त तपाई पनि लोग्ने मान्छे
अन्यथा नलिनु होला
तर यो जात नरभक्षी हुँदोरहेछ
लड्दा लड्दा नथाक्ने यिनीहरू
पैसाको लागि जे पनि गर्छन्
आफू पनि बेचिन्छन्
अरूलाई पनि पशुजस्तो बेच्छन्
म पनि बेचिएकी छु
तपाईलाई के भन्ने ?
तपाई नै घरको मालिक हुनुहुन्थ्यो
जे चाह्यो त्यहि गर्न सक्नुहुन्थ्यो
ममाथि दया नै गद्या भए पनि हुन्थ्यो
मलाई पढाइद्या भए हुन्थ्यो
कसलाई सोध्याछु भनौँ-
मेरो नाम सुन्दा थुक्ने थुप्रै होलान्
खै तिनीहरूलाई के भनौँ ?
भनेर म थाक्छु तिनीहरूले के बुझ्लान् ?
खैर समय बितीसक्यो
बाँच्ने समय पनि सकिसक्यो
छोरी मरी नभन्नु होला
त्यो बहिनीलाई स्कुल पठाउनु होला
समय परिस्थीती बुझाउनु होला।
Author AnbikaPosted on January 8, 2013 Categories Poem1 Comment on बालाई चिठी
के भा’को हामीलाई!
हामीलाई हाम्रो देशमा अरूले डण्डा देखाएर नियम बसालिदेओस् भन्ने लाग्न थाले जस्तो छ।
राजधानीको मेरो डेरा नजिकैको बाटो वान–वे हो। मूल सडकबाट मोडिने ठाउँमै वान–वे भनेर बुझाउने बोर्ड पनि छ। तर, वान–वे हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि मानिसहरू त्यहाँ गाडी हुलेर जाम गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता गाडीवालाहरू पटक्कै लज्जाबोध वा अप्ठ्यारो मानिरहेका हुँदैनन्, बरु च्यापिन लागेका पैदल यात्रीहरूलाई आँखा तरिरहेका हुन्छन्। त्यहाँ हत्तपत्त ट्राफिकको आँखा पुग्दैन। डण्डा लिएर कसैले निगरानी नगरेकाले वान–वेको नियम मान्न कोही तयार छैनन्, मानौं हामीसँग विना डण्डा देखाउन मिल्ने सुसंस्कार नै छैन।
एक समय ट्राफिक नियम पालना गराउन काठमाडौंको चोकमा उभिन आएका जापानी स्वयंसेवी कियोसी बाबाले ट्राफिक नियम नमान्ने पैदलयात्रुदेखि बहालवाला डीआईजीसम्मको गाडी रोकेर लाइसेन्स माग्नुपर्योक। “यहाँ मेरो सबैले वाह्वाही गरेका छन्, धेरै अखबारले अन्तरवार्ता पनि लिइसके, तर मैले त यहींका मान्छेले गर्न सक्ने काम मात्रै गरेको हुँ”, एक भेटमा कियोसी बाबाले भनेका थिए। तर, हाम्रा मुख्य सडकहरूमा अझै पनि बडा–बडा डिभाइडर राखेर, तिनमा डोरी टाँगेर पनि नपुगेर प्रहरीहरू डण्डा लिएर खट्नु परेको छ। Continue reading “के भा’को हामीलाई!”
Author AnbikaPosted on December 25, 2012 Categories Uncategorized1 Comment on के भा’को हामीलाई!
‘काठमाडौं शहर हेर्दा लाग्छ रहर, गिद्धै गिद्धको शहर! दिमाग चला पासा, पैसा खस्छ बरर …!’
गत वर्ष खुब चलेको नेपाली चलचित्र ‘लूट’ का पात्र हाकु कालेले काठमाडौंलाई यसरी गरेको व्याख्यालाई दर्शकले औधी मन पराए। सार्वजनिक बसमा होस् या काठमाडौंमा जोडेको निजी कारमा, अस्ति दशैं मनाउन घर जाँदाजाँदै पनि धेरै मान्छेले यो शहरलाई सकेको गाली गरे। दशैंपछि उनीहरू फेरि ‘यो स्वार्थी, पीडक शहर’ भन्दै काठमाडौं छिरे। फेसबुकका भित्ता र ट्वीटरको टाइमलाइनहरूमा छाएका त्यस्ता स्टाटस्मा अझै पनि ‘लाइक’ को वर्षा भइरहेको छ।
बाहिरका त बाहिरिया भइहाले, यहींकाहरू पनि काठमाडौंसँग निकै रिसाएका देखिन्छन्। उनीहरू यहाँबाट बाहिरिंदा ‘आनन्द’ अनुभव गर्छन् र भित्रिंदा ‘दिक्क’ मान्छन्। लाग्छ, जो पनि काठमाडौंलाई एकचरण गाली नगरी ननिदाउने भएका छन्। यहींका, बाहिरका जोसुकै हुन् हरेकबाट दुत्कारिनु काठमाडौंको नियति भएको छ। यो पंक्तिकारले फेसबुकमा काठमाडौंबारे तपाईंको मनमा के छ भनेर लेख्दा आएका २६ प्रतिक्रियामध्ये जम्मा दुइटा सकारात्मक थिए। काठमाडौंप्रतिको गुनासो, इर्ष्या वा रीस नयाँ होइन, जुन अहिले यो ढंगले व्यक्त भइरहेको छ। काठमाडौंलाई बद्नाम गरिएको साहित्य, चलचित्र हिट हुने संभावना बढेको बढ्यै छ।
Continue reading “सहनशील शहर”
Author AnbikaPosted on December 17, 2012 Categories Uncategorized1 Comment on सहनशील शहर
राजनीतिक रोगीको ‘दिल्ली उपचार’
(पुरानो लेख, जुन मैले 2009-03-12 मा लेखेको थिए, नयाँ पत्रिकामा छापिएको थियो)
हामीले फेरि एउटा घिनलाग्दो नाटक हेर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। यस नाटकको प्रथम शंृखलामा हाम्रो देशका घगडान नेताहरू अस्वस्थ भएका छन्। तिनीहरू उपचार गर्न दिल्लीको साउथ ब्लकनजिकैको कुनै अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। बिरामी जँचाएर उब्रेको समयमा भारतीय नेताहरूसँग छोटो कुराकानी गर्न भ्याएका छन्। नेताहरूको अनुकूल राजनीतिक परिस्थिति नभएपछि स्वास्थ्यमा समस्या आउनु र उपचारका लागि दिल्ली नै जानु हामीले देखिरहेको पुरानै नाटक हो। यसपालि फरक के छ भने यस नाटकमा केपी ओली नाम गरेका पात्र पनि बिरामीका रूपमा थपिएका छन्। सदाझैं गिरिजाप्रसाद कोइराला नाटकमा मुख्य पात्रका रूपमा रहेका हुन्थे। कुनै न कुनै बहानामा अरू पात्र दिल्ली जाने जनाउ मञ्चका सूत्रधारका रूपमा रहेका मिडियाले दिएका छन्।
गद्दीच्यूत राजा ज्ञानेन्द्र, सूर्यबहादुर थापालगायत सबैले नाटकमा हिस्सा लिएकामा नेपाली जनतालाई आश्चर्य छैन। हामीले यी पात्रबाट यसभन्दा बढी अपेक्षा पनि गरेका थिएनौँ। दर्शकहरू ः हामी जनता नाटकबारे हरेक पटकझैं यसपालि पनि अनभिज्ञ छौँ। हाम्रो मनमा एउटा प्रश्न छ, के नेपालका डाक्टरहरू यति निकम्मा छन् त ? हाम्रा नेतालाई ठीक पार्नै सक्दैनन् ? फेरि, जवाफ हामीसँगै छ, स्वास्थ्यसम्बन्धी रोग भए पो निको पार्न सकून् त ! सत्ताको रोग निको पार्ने सामथ्र्य त यी शुद्ध प्राविधिकहरूसँग कहाँबाट होस् ! उनीहरूलाई चाहिएको त धेरै वर्षदेखि साउथ ब्लकले राजनीतिक रूपले पालेका कूटनीतिक डाक्टरहरू पो हुन् त।
Continue reading “राजनीतिक रोगीको ‘दिल्ली उपचार’”
Author AnbikaPosted on March 22, 2012 Categories articleTags NepaliPoliticsLeaveacomment on राजनीतिक रोगीको ‘दिल्ली उपचार’
Continue reading “विदेशी मित्र”
Author AnbikaPosted on March 12, 2012 March 22, 2012 Categories FictionTags Story2 Comments on विदेशी मित्र
उसको एउटा तस्बिर पनि थिएन। म कहिलेकाहीँ उसको बाक्लो आँखीभौं सम्झ्न्थें र त्यसै त्यसै गल्थें। उसलाई आफ्नो आँखीभौं त्यतिविधि बाक्लो भएकोमा सारै पीर थियो। आमाको, बुबाको, मेरो, काकाको कसैको पनि आँखीभांै त्यस्तो थिएन। हजुरबुबाको पो थियो कि? ऊ आमाबुबा दुवैलाई कचकच गरिरहन्थ्यो। अब तँलाई कोही केटीले बिहे गर्दैनन्, म उसलाई चिढ्याइरहन्थेँ। शुरुमा ऊ रुन्थ्यो, पछि-पछि त यही आँखीभौं देखेर ज्यान फालेर आउने छन् भन्थ्यो। हामी मरी-मरी हाँस्थ्यौं। ऊ हाँसेको सम्झदा अहिले भक्कानो फुट्छ।
म एसएलसी परीक्षाको तयारीमा थिएँ। उसले भर्खर नौ कक्षा पास गरेको थियो। कसले बहकायो कुन्नि, एक दिन अचानक भन्यो, “बुर्जुवा शिक्षा बेकार हो।”
“कसले भन्यो तँलाई यस्तो वाहियात कुरा हँ?”
ऊ केही बोलेन। तर, मेरो परीक्षा सकिएको भोलिपल्ट आधा रातमा उठाएर बरण्डामा ल्यायो अनि भन्यो, “दिदी, तेरो एसएलसी बिग्रन्छ भनेर आजसम्म कुरिरहेको थिएँ। अब म क्रान्तिमा हिँडेँ।”
वैशाख यसै पनि गर्मी महिना। उसको कुराले मलाई लोथ बनायो। जूनको उज्यालोमा उसको अनुहार नियाल्न खोजेँ, बाक्लो आँखीभौं मुनि निख्खर कालो आँखा चम्किएको थियो। मैले उसको हात समाएँ। उसले झ्ोला भिरिसकेको रहेछ। तैपनि, सोधेँ, “के भनेको?”
“दिदी, देशलाई हाम्रो खाँचो छ”, ऊ मान्नेवाला कहाँ थियो र!
Continue reading “बेपत्ता”
Author AnbikaPosted on June 24, 2011 March 22, 2012 Categories FictionTags disappearance, MaoistMovement10 Comments on बेपत्ता